R/wasaare ku xigeenka dalka oo Xildhibaanada ku Bogaadiyay hanaanka dimuqraadiga ay u doorteen Guddoomiyaha cusub – Radio Muqdisho
R/wasaare ku xigeenka dalka oo Xildhibaanada ku Bogaadiyay hanaanka dimuqraadiga ay u doorteen Guddoomiyaha cusub
Ra’iisalwasaare ku xigeenka xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Md Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa Hambalyo u diray Guddoomiyaha cusub ee Golaha shacabka.
Ku xigeenka Ra’iisalwasaaruhu waxaa uu mudanayaasha Baarlamaanka ku boogaadiyay hanaanka demoqraadiyada leh ee ay ku doorteen Guddoomiyaha cusub.
Qoraal kooban uu ku baahiyay boggiisa twitter-ka ayaa udhignaa sidan.
“Waxaan hambalyo u dirayaa Guddoomiyaha cusub ee Barlamaanka Md Maxamed Mursal waxaan u rajaynayaa in ilaahay xilka u fududeeyo, waxaan kale oo Golaha shacabka ku boogaadinayaa hanaanka Dimoqraadiyaddu bud-dhiga u tahay ah ee ay ku doorteen Guddoomiyaha cusub”.
Madaxweyne Farmaajo “Waxaan Beledweyne u imid in aan idin la qeybsado xanuunka iyo dhibka aad ku jirtaan” SAWIRRO